Nezvaanogona - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Kukura kugadzira michina uye Kushanduka pcb azoshandiswa kwacho kubvumira pcb vagadziri kudhinda tsika yakagadzirwa PCBs uye kurwira kuti vatengi mukati mazuva.
Standard pcb Lead nguva
Pano pana Wonderful pcb, kutungamirira nguva rinoreva nguva yatinoda kuti akadhindwa vematunhu mapuranga azoshandiswa. Zvinonzi kuverengwa kubva wechipiri nokushanda mazuva zvichiteverwa murayiro wenyu muripo chionekeso uye faira chisimbiso. Tapota cherechedza kuti haibatanidzi mazororo kana kwevhiki.
Kazhinji, kutungamirira nguva yedu kunotsamira wako wedunhu magadzirirwo kuti kunzwisisa uye tsika dzako zvinodiwa. Tine inokwanisa kuti kumumvuri mapuranga 3-7 zuva. Kana mwero pcb kugadzirwa, isu 3 mutobvu nguva nzira kupa. Ndapota kureva zvinotevera tafura hwakadzama info. Unogona kusarudza kwako kutsvakwa vatungamirire nguva apo mashoko paIndaneti, ndichaenda isu ngaaverenge pcb mutengo kwakavakirwa yako zvaida vatungamirire nguva maererano.
Kufunga Vamwe zvirongwa ndinokumbirira munhu mupfupi zvikuru purogiramu, kunyanya kana iwe unopedza nguva yakawandisa uri pcb magadzirirwo kana injiniya rwakazara uye vanofanira kubata pakubudiswa, tinopa pcb Expedited Service kukubatsira kundochingamidza wava. Tine inokwanisa kudhinda wako pcb mapuranga chete yepamusoro sezvo isu yakapikirwa yedu Standard PCBs Services inotanga kubva 2 pamazuva. Extra nokuchengeta vachapiwa zvakaitika expediting kwako zvirevo pcb.
Anodei kukurumidza pcb murayiro? Sunungukai kukurukura kwako zvinodiwa nesu pa wonderful@wonderfulpcb.com .